Sawirro:-Shir sedex geesood ah oo lagu qabtay Magaalada Asmara + maxaa looga hadlay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro:-Shir sedex geesood ah oo lagu qabtay Magaalada Asmara + maxaa looga hadlay
Magaalada Asmara ee caasimadda Dalka Eritrea ayaa waxaa ka dhacay shir sedex geesood ah oo u dhexeeya Soomaaliya,Eritrea iyo Itoobiya, iyadoo hoggaamiyaasha dalalkani ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa arrimaha ka dhex taagan Jabuuti iyo Eritrea.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya AXmed Ciise Cawad oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in madaxda Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ay ka wada hadleen arrimaha ka dhex taagan Jabuuti iyo Eritrea.
Wasiirka ayaa sheegay in madaxda ay go’aamiyeen in wasiirrada arrimaha dibadda ee dalalkan ay si degdeg ah u bilaabayaan wadaa xaajoodyada labada dhinac,si loo soo afjaro xisadaha labada dal ka dhexeeya.
Dhanka kale Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Eritrea Mudane Isaias Afwerki iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Mudane Abiy Axmed ayaa heshiis saddex geesood ah ku kala saxiixday magaalada Asmara.
Shirkan ayaa qeyb ka ah qorshayaal lagu hirgelinayo ka faa’idaysiga heshiisyo caalami ah oo horey looga gaaray wadamo uu kamid yahay Shiinaha,halkaasi oo dhawaan lagu soo geba gebeeyey shirka iskaashiga Shiinaha iyo Africa.
Caasimadaha Muqdisho iyo Ankara oo la mataaneynayo kadib markii heshiis la saxiixay
Xaalada Degmada Jalalaqsi oo saakay kacsan iyo ciidamo gudaha u galay